I-European Union ivala ngokusesikweni i-airspace yayo kwiinqwelomoya zaseBelarusian
Ikhaya » Iindaba zokuhamba zaseYurophu » I-European Union ivala ngokusesikweni i-airspace yayo kwiinqwelomoya zaseBelarusian
IBhunga laseYurophu namhlanje ligqibe kwelokuba liqinise amanyathelo athintelayo ngokujonga imeko e-Belarus ngokwazisa ukuthintelwa kwesibhakabhaka se-EU kunye nokufikelela kwizikhululo zeenqwelo moya ze-EU ngabo bonke abathwali beBelarusian.
I-European Council yazisa ngengubo yokuvalwa kweenqwelo moya zase Belarusian
Amalungu e-EU aya kucelwa ukuba ayikhanyele imvume yokungena emhlabeni, asuse okanye agqobhoze indawo yakhe kuyo nayiphi na inqwelomoya esebenza ngabaphethe umoya eBelarus
Ukuvalwa kwe-EU kuza emva koqweqwediso lwendiza yeRyanair
Amazwe angamalungu e-European Union anyanzelise ngokusesikweni ukuthintela ingubo kubo bonke abathwali bomoya base-Belarus ukuba bangene kwindawo yomoya ye-EU. Ukuvalwa ngokupheleleyo kuza emva kokubanjwa kuka-Roman Protasevich womzabalazo ophikisayo ngabantu base Belarus emva kolawulo Ryanair Iinqwelomoya ezazimphethe zaxhwilwa zanyanzelwa ukuba zehle eMinsk ngoMeyi 23.
IBhunga laseYurophu libhengeze isigqibo sokunqanda ingubo namhlanje, kulandela ukubonisana phakathi koonozakuzaku abaphezulu be-EU.
udibano lwaseyurophu Amazwe angamalungu "aya kucelwa ukuba angavumi imvume yokungena emhlabeni, asuse imimandla yakhe kuyo nayiphi na inqwelo-moya eqhutywa ngabaphathi beenqwelo moya baseBelarus."
Ukuvalwa kwakhona kuchaphazela abaqhubi abathengisa izihlalo kwiinqwelomoya eziqhutywa yenye inqwelo moya, kwaye ziya kuqala ukusebenza ezinzulwini zobusuku (22:00 GMT), kwangolo suku lunye.
Ukuvalwa kweYurophu yonke kuza kwiintsuku ezimbini emva kokuba i-Arhente yoKhuseleko lwezoKhuselo kwi-EU (i-EASA) iphucule 'ingcebiso' yayo yokuba abathwali be-bloc bathintele iBelarus iye kwisibhengezo esipheleleyo. I-EASA ikhuphe "uMyalelo woKhuseleko" esithi akukho zindiza ze-EU kufuneka zingene kwi-airpace yaseBelarusian ngaphandle kwexesha likaxakeka.
Ukuthathwa ngenqwelomoya ngenqwelomoya ngoMeyi 23 iRyanair ithumele izothuso eziqhubekayo kushishino lokuhamba ngenqwelo moya lwamazwe aphesheya. Inqwelomoya, ebisuka eGrisi isiya eLithuania, yaxhwilwa yanyanzelwa ukuba ifike eMinsk ngenxa yesoyikiso sebhombu. Ngaphandle kokuthetha, akukho bhombu yafunyanwa ebhodini, ngelixa imvelaphi kunye nexesha 'lomyalezo wesilumkiso' zikhomba ngokucacileyo 'kwintsebenzo ekhethekileyo' eqhutywa yi-Belarus KGB.
Ngokukhawuleza emva kokufika ngenkani kwisikhululo seenqwelomoya iMinsk, iiarhente zokhuseleko zaseBelarus zakhwela inqwelomoya zaza zabamba uProtasevich owayefunwa ngurhulumente kaLukashenko nentombi yakhe, ummi waseRussia uSofia Sapega.